लिखु गडतिर सडक
शुक्रबार १२ असार, २०७७ Dev Shankar Poudel 5078
रामेछापको गुम्देल, ओखलढुङ्गाको भुसिङ्गा र सोलुखुम्बुको भकाञ्जेदेखिका आलु, धनुषा (चिसापानी, गोद्वार) पुर्याउने र गोद्वारबाट नुन, तेल, सुर्ती, हिमाल पुर्याउने पुरानो बाटो लिखु एकवार भएर सुमनाम, डडुवा, बाहुन तिल्पुङ भएर महाभारत, चुरे पर्वत पार गरेर कष्टकर ढाकरे यात्रा हाम्रा पुर्खाले गरे । वि.सं. २००७ सालसम्म फलाममा आत्मनिर्भर रामेछाप त्यसपछि भारतीय फलामको भारी चुइक्क बोक्न बाध्य बनाइयो । मधेसको भारी हिमाल र हिमालको मधेश पुर्याउनेसम्म चाहिं हाम्रो पुस्ताले पनि धेरथोर भ्यायो ।
मानव श्रम नपरेजस्ता लाग्ने विकट अक्करे बाटाहरू पार गरे । तराई र गढतिरको तातो बलौटे बगर, तिखा ढुङ्गा र जङ्गली काँडा टेक्दै नाङ्गा पैताला यात्रा गरेर, हाम्रा पुर्खाहरूले जुनी भरी कहर काट्नुसम्म काटे । त्यसवेला कुनै पनि खोलामा पुल थिएनन् । सुनकोशीमा डुँगा र अन्य खोलाहरूमा सशरीर हेलिनु पथ्र्यो । कैयौंलाई लिखु र अन्य ठाडाखोलाहरूले बगायो !! एकमुष्ट तथ्य तथ्याङ्क छैन । कैयनलाइ त बाङ्ग्रिङको जङ्गलमा बाघले खायो । कतिपय औलो, हैजा आदि लागेर हिंड्दा हिंड्दै बाटैमा देहत्याग गरे । रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका लिखुखोले र त्यस आसपासकाहरूले पहाडी सभ्यताको सुरुवाती समय देखिनै कष्टकर जीवन बिताउँदै आए । कतिपय नुन, तेल, खाद्यान्न नजिक पार्न तराई मै बसाईं सरे ।
यस अघि यो भन्दा अनकण्टार अक्कर पार गरेर हिमालय पर्वत छिचोल्दै कुतीसम्म पुगेर नुन ल्याएर खानु पर्थ्यो। त्यस बेला पनि कैयन पूर्वजहरू हिउँले औला झर्ने, हिमाली नदिहरूका खोंजमा पर्ने, भीरबाट चिप्लिने, पहिरामा पर्ने, लेखलाग्ने भएर बाटैमा देहत्याग गर्थे । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको “मुना–मदन” त्यस जनजीवनको प्रतिविम्व साहित्य हो ।
नेपालका सवै पहाडी गाउँघरमा हामी र हाम्रा पूर्वजहरु, यस किसिमका कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य थिए । हिमाल, पहाड, जङ्गल, नदी, मैदानआदि भौगोलिक बनावट बमोजिम विकासको रेखाङ्कन र त्यस बमोजिम प्राथमिकीकरण गरिनु पर्दछ । पहुँच भन्दा आवस्यकताका आधारमा राज्यका कदम चल्नु पर्दछ । यसो हुनासाथ यी अनकण्टार भएर पनि भरपुर खनिज, जडिबूटी र उर्वर भूमिले काँचुली फेर्ने छ । मुलुकको बर्तमान राज्य प्रणाली त्यतातिर प्रभावकारी कदम चाल्दै गरेको आभाष हुनथालेको छ ।
हामी जानु थियो, दक्षिण दिशाको बाटोस पायौं फन्फनी घुमेर उत्तरतर्फको बाटो । बल्लबल्ल पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सोझियो । त्यसले धेरै सुविधा मिलेको त छस तर ससाना गाडीमात्र गुड्ने अनुमतिका कारण उत्तर–दक्षिण नमुना सडकले पर्याप्त सुविधा दिन सकेन । यो द्रुत सुविधा पनि भएन । अझै पनि हाम्रालागि महाभारत र चुरे पर्वत पारगर्नु असहज भएको छ । फलतः महंगी नियन्त्रण हुन सकेन । जवसम्म सोझै दक्षिणतर्फ फराकिलो र बलियो सडकले जोडिन्न, तवसम्म हाम्रो हालत यस्तै रहन्छस यातायातको सुब्यवस्था हुँदैन ।
लिखु उपत्यका आफूलाई परम्परादेखि पाल्दै आएको दक्षिण धनुषा जिल्लाको राम–जानकी मन्दिरसंग जोडिन चाहन्थ्यो । उ यति धेरै ब्यग्र थियो कि; रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको नेतृत्वले आफूलाई गहिरिएर खोज्यो । विकासको विन्दु पहिचान गर्न घोरियो । उसले ध्यान केन्द्रीत गर्दा लिखुका भीर र सुनकोशी नदि बाधा देख्यो । त्यस माथी एक किमिको दुरीमा छ/छ स्पानका दुइवटा सेतु बनाउने संकल्प गर्यो। एक किलोमिटरको दुरीमा सायद यति ठूल्ठूला पुलहरू कहिँ बनेका छैनन् होला । आज युद्धस्तरमा पक्की पुल बनाउँदै छ । अनि लिखुका अवशिष्ट कडा चट्टानी भीरहरु फोर्दै छ ।
जसरी पुलमा प्रतिस्पर्धा छ, त्यसैगरी लिखु एकवारबाट उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकमा पनि प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । अव लिखुको कोलोञ्जोरघाट–नवलपुरघाट, गाङटार वा फ्यामे–भर्याङटार, बसेरी–नौविसे, साँघुटार–सिंहदेवी, सियाले–महादेवटार, सिसन्दु–माटे, सिरिसे–साठीबेशी, ढाँडे–लेती, भुजी–रङ्गनी, प्रिती–खिजी, कुँबुकाँस्थली–रावादोलु, कोर्याम–किञ्जा, बच्छी आदिमा कहिं पुल बनिसके कहिं बन्नेछन् । जुनजुन एकवारका बाटा छोटा र सजिला हुनेछन्, त्यतैका बाटा चल्तिका हुनेछन् । गाडिहरू त्यतै गुड्ने छन् । जुनजुन बाटा लामा र घुमाउरा हुनेछन् । ती बैकल्पिक सडकका रुपमा लमतन्न सुतिरहने छन् । सडक खन्ने र खनाउनेहरुले ध्यान दिनु पर्ने आजको मुल विषय यो हो । मुल सडक घुमाएर घरघरमा होइन, घर मुल खडकमा सार्नु दिगो विकासका लागी बुद्धिमानी हुनेछ ।
लिखु गढतिर सयौं पटक ओहोर दोहोर गरियो । अव सडक खनिए पछि पैदल यात्रा बन्द हुनेछ । बाटो बनी नसक्दै अन्तिम पटक पैदल यात्रा गरौं, भन्ने लागेर गत बर्ष श्रीहरि श्रेष्ठ, विन्दा घिमिरे, कमल राई, प्रमीला श्रेष्ठ, सन्दीप अर्याल, विनय हुमागाईं, रोशन खत्री गोठगाउँदेखि लिखु एक गढतिरको बाटो लिखु बगेतिरै यात्रा तय गरेका थियौं । लिखु उपत्यकाकै सवैभन्दा विकट अक्करे पहराबाट बाटो पार गर्न रामेछाप र ओखलढुङ्गा दुवै तिर मुस्किल परिरहेको थियो । लिखुबगेकै ठाउँ मलेवा ओडार सतहबाट बाटो लान सकिने अनुमान स्थानीय समुदायको मनमा जन्मिएको रहेछ । सो सुझाव राजकुमार श्रेष्ठ, हिरालाल उदास, रामप्रसाद ढकाल, होतराज ढकाल, दीपक ढकाल, नीलकण्ठ ढकाल, जयन्ती उदास, विन्दा घिमिरे आदिले दिनुभएको थियो । यहि कुरा पार्टीको पहुँच र सरोकारवाला नेतृत्वसंग छलफल भयो । यो नै उपयुक्त विकल्प ठहरियो।
वागमति प्रदेश सभाका सदस्य माननीय शान्तिप्रसाद पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोशको रकम छुट्ट्याइदिनु भयो । कार्यान्वयनमा लान रामेछाप नपाका मेयर नरबहादुर थापा मगरजीको समेत सक्रियता रह्यो । खिम्ती खोलो फर्काएको अनुभवले खारिएका प्राविधिक हरिश्चन्द्र बरालजीको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम थालनी भयो । अहिले उक्त बाटो कोरोनाको प्रकोपका विचमा समेत सामाजिक दुरी कायम गर्दै नदिको बहाव फर्काएर बाटो निर्माण भएछ । समयको ब्यस्तता, महामारीले सिर्जना गरेको प्रतिकुलताका विच पनि माननीय शान्तिप्रसाद पौडेल, जि.स.स. प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का, लिखुतामाकोशी गा.पा. अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्का, होतराज ढकाल, रविन्द्र पौडेल, बैकुण्ठ गौतम, वडाध्यक्ष भुपाल श्रेष्ठ र यामबहादुर महत लगायत दत्रुङ्गे पुगेका थियौं । कामको निखार ल्याउन आगामी बर्ष पर्खनु पर्ने देखिन्छ । यो काम दिगो विकासका निम्ति उदाहरणीय बन्ने छ ।
Photo: Shree Hari Shrestha
???? ????? ??? akohnwcdv kohnwcdv http://www.ga871uu2w5567378d5tjd35kape8xcj4s.org/ [url=http://www.ga871uu2w5567378d5tjd35kape8xcj4s.org/]ukohnwcdv[/url]
Nike Superfly7Academy Sg-pro Ac Football Boots Sneakers Original American USA Customized - Zapatos Personalizados (Producto Artesano) Wave Jungen Nemeziz 17.3 Fg J Fu?ballschuhe. Schwarz/Rot. 36 EU BERMUDA-SL1786 Electro III Clog K. Sabots Mixte Enfant Camlock Quick Connection
Cheap Custom Sunglasses Supplier
China Bohemian Style Car Steering Wheel Covers
Bohemian Style Car Steering Wheel Covers Supplier
Manual Suction Supplier
Hotel Grade Bed Sheets Supplier
Designer Slipper Supplier
सडक पिच नभएको भन्दै स्थानीयहरुकाे आन्दोलन जारी
सडक दुर्घटनामा अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद शर्मासहित दुई जनाको मृत्यु
पहिरोमा परी रामेछापमा एक महिलाको मृत्यु, मन्थली–खुकोट सडक अवरुद्ध
आज पनि अबरुद्ध मुग्लिन–नारयणागढ सडक